Vaovao - Nahoana no ampiasaina amin'ny sary sokitra ny varahina
Ny sary sokitra varahina dia manana fotoana lava be izay azo tazonina sy voatokana tsara kokoa mandritra ny taona an-jatony. Raha ampitahaina amin'ny sary sokitra hafa, ny sary vongana varahina dia manana tantara lava ihany koa, sa tsy izany? Fantatsika fa ny fanaovana sary sokitra varahina dia azo atao endrika, endrika biby sns, noho ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany sy manokana. Ka ny mpanakanto sary sokitra no hifidy ity sary sokitra varahina ity mba hamoronana ny sary sokitra varahina ankehitriny.
Ny sary sokitra maoderina dia azo vita amin'ny varahina, fibre, stainless vy, vy corten sns. Azontsika atao ny mifanaraka amin'ny zavatra takinao manokana mba hampanjifaina ny sary vongana, fa mila mametraka ny endriny na ny toerana fampiharana ihany koa izahay mba hanomezana torolàlana ho an'ny mpanjifanay.
Manana traikefa amin'ny sculpture sculpture efa ho 13 taona mahery isika, ka maninona raha hifandraisa aminay raha te hanana an'io ianao, misaotra! Ny sary sokitra vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia tsara tarehy ary misy ny loko ho anay raha vao mampahafantatra anay ny zavatra takinao ianao. Maninona raha hifandraisa avy hatrany e! Misaotra!
Mampahafantatra ny orinasa
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD.dia misy ao amin'ny tanànan'i Xiamen, faritanin'i Fujian, Sina. Nanao sary sokitra vy sy sarivongana vita tamin'ny metaly nandritra ny 10 taona mahery izahay. Ny vokarintsika dia misy sary sokitra ivelany, sary sokitra, zaridainan'ny zaridaina, sary sokitra ao an-tanàna sns.
Safidintsika ho fitaovana lehibe ny tontolo iainana, toy ny vy vy, varahina, fitaovana fiberglass. Tsara ho an'ny haingo ivelany sy anaty izy ireo. Noho izany dia ampiasaina be eo amin'ny sehatry ny fanaovana sokitra izahay.
Mino izahay fa afaka manolotra vidiny tsara indrindra sy vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifanay, ary mifidy anay fa hahazo ny tsara indrindra ianao. Azafady mba mifandraisa aminay toy ny eto ambany, misaotra!
Mpivarotra: Rtoa Cathy
App fampiharana: 0086-13950110440
Facebook: 0086-13950110440 (na sary sokitra cathy)
Mampifandray: sary sokitra Cathy
Fotoana fandefasana: Jul-06-2020